Description:Tofehy masking mifangaro,Tanjona amin'ny fiketrehana ankapobeny,Tape taratasy fanjairana
 HomeProductsTaling SealingTape TopGeneral paper taratasy adhesive masking tape
Fametahana taratasy ho an'ny jeneraly amin'ny fametahana takelaka masking dia mihatra mora amin'ny zorony, miorim-bolo ary tsy miovaova. P aper masking papier dia mety ho an'ny sary hosodoko automatique sy tranon'ny trano anatiny. Ny taratasy fangatahana miraikitra dia ampiasaina amin'ny fitaovana elektronika, hardware, fanaka, kiraro fanamboarana trano, kilalao ary indostria hafa. Rakotra masking dia manana loko maro, afaka miraikitra amin'ny taratasy, ny composite PET, PVC ary fitaovana hafa. Ny fanolorana serivisy OEM sy ODM dia afaka manao fanao gum Tape sy Duct Tape.
☆ Iray amin'ireo mpanamboatra horonantsary mivelatra lehibe indrindra any Chine izahay, miaraka amin'ny lozisialy 3Multi haingam-pandeha haingam-pandeha LLDPE mivaingana horonantsary famokarana horonantsary.
Mivarom-peo mibahan-toerana miloko onjam-peo masking Contact Now
miloko paking miloko masking Contact Now
loko rakotra masking masing Contact Now
manga rakotra taratasy mofomamy Contact Now
Tanjona amin'ny fiketrehana goavambe ho an'ny trano sy birao Contact Now
Sarimihetsika miloko tokana miloko tokana ho an'ny Masking Contact Now
Tapezy fametahana taratasy amin'ny fiara otomotif Contact Now
Taratasy krep jumbo horonan-taratasy fametahana takelaka tokana Contact Now
Tofehy masking mifangaro Tanjona amin'ny fiketrehana ankapobeny Tape taratasy fanjairana Tape masking mifangaro Tape masking maintso Tapeant Tistant mifangaro Loko masking miloko Tape masking mety